China Isigqoko sebhayisikili abakhiqizi nabaphakeli UChapman
Isikhunta CHA. I-CPM-191009
Inqubo Yokuqeda Ubuso IsiPolish # 600
Izinto zepulasitiki I-PP
Ingxenye isisindo 300g
Usayizi wengxenye 320mm X 230mm X 210mm
Kwenziwe ngentando Kwenziwe ngentando
Usayizi isikhunta 650 X 600 X 531mm
Igama Lesikhunta Isigqoko sebhayisikili
Isikhunta Cavity 1 * 1
Umgijimi Umgijimi obandayo weSango lasePhoyinti
Isikhunta Material 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Isikhunta Sokuphila 500,000
Isikhathi esiholayo Izinsuku ezingama-45
Isikhunta Isikhathi Sesikhathi: 37's
Inkokhelo T T
I-traumata yebhayisikili ivame kakhulu futhi ikakhulukazi izinkinga ze-neurologic ziholela ekukhubazekeni nasekufeni kuzo zonke izigaba zokuphila. Lokhu kubuyekezwa kuhlanganisa okutholwe kwakamuva kakhulu okuphathelene nocwaningo emkhakheni we-traumata yamabhayisikili kuhlanganiswe nento yokusebenzisa isigqoko sokuvikela isigqoko sebhayisikili. Indawo yocwaningo lokuhlukumezeka ngamabhayisekili ngokwemvelo inemikhakha ehlukahlukene futhi ayisebenzi kodokotela kuphela kepha nakubachwepheshe abanemisebenzi yezemfundo, ezobunjiniyela, ezobulungiswa, zokuvuselela noma ezempilo yomphakathi. Ngenxa yobuningi bokushicilelwa komhlaba nezihloko ezikhethekile, ukubuyekezwa kwesikhathi esifushane kusiza ekutholeni izinkomba zakamuva zocwaningo futhi kunikeze nemininingwane evela ezikhungweni zomakhelwane zabaphenyi. Kungashiwo ukuthi kuze kube manje, ukuthi yize kunenqwaba yocwaningo olwenziwe kule ndawo kudingeka izifundo eziningi ukuhlola nokuthuthukisa izimo ezikhethekile nezidingo ezifundeni ezahlukahlukene, ubudala, ubuzwe kanye nokwenza izinhlelo zokuvikela eziphumelelayo zekhanda elibi futhi ukulimala ebusweni ngenkathi uhamba ngebhayisikili.
Isithombe: Isigqoko sokuzivikela siyisindisa kanjani impilo yakho: Uma ugoqa ikhanda lakho, igobolondo elingaphandle eliqinile (elimnyama) lisabalalisa umthelela endaweni ebanzi. I-liner yangaphakathi ethambile (i-orange) bese imunca amandla ngokulinganayo (ngethemba) kukhona ukulimala okuncane ekhanda lakho.Ngaphandle kwesigqoko sokuzivikela, wonke umthelela ubungagxila engxenyeni encane yekhanda lakho, okungenzeka ukuthi uqhekeke ugebhezi lwakho futhi ulimaze nengqondo yakho.
Ekuboneni kokuqala, isigqoko sokuzivikela somjikelezo sibukeka sifana nanoma yisiphi esinye isigqoko, kodwa bheka ngokucophelela futhi uzobona ukucabanga okuningi — nesayensi — sekuklanywe. Isigqoko sokuzivikela esivamile sinezingxenye ezimbili eziyinhloko: igobolondo elingaphandle eliqinile ne-liner yangaphakathi ethambile. Igobolondo elilukhuni lenzelwe ukusabalalisa amandla omthelela endaweni ebanzi ukuze ugebhezi lwakho lungabi namathuba amancane okuqhekeka, kuyilapho i-liner ethambile ihloselwe ukungena ngaphakathi nokubamba amandla omthelela, ngakho-ke incane yalo idluliselwa ekhanda lakho.
Abantu babevame ukucabanga ukuthi izigqoko zokuhamba ngamabhayisikili azipholi, kepha konke sekuguqukile manje. Ngeke uthole noma yimuphi umjaho wamabhayisikili oqeqeshiwe emgwaqeni noma ithrekhi ngaphandle kwesigqoko sokuzivikela eboshwe ngokuqinile ekhanda labo. Futhi izigqoko zokuzivikela zingcono kakhulu kunangaphambili. Uke waqaphela ukuthi abapholile abagibeli bamabhayisikili bama-Olimpiki babukeka kanjani kulezo zigqoko ezinjenge-teardrop ezinjenge-teardrop? Cishe sonke isigqoko sokuzivikela sesimanjemanje sishise ngokumangazayo futhi singenza ngisho nabagibeli abahamba kancane kunabo bonke basike udwi. Igama elilodwa lesexwayiso, noma kunjalo. Wonke umuntu ufuna ukubukeka emuhle, kepha khumbula ukuthi isigqoko sokuzivikela somjikelezo simayelana nokuvikelwa. Izinganekwane, okungeziwe okubanzi ngokuvamile kumane nje kuyizindlela zokumaketha — ngakho ungachithi imali yakho.
Ukwakha inani lamakhasimende nokulenza liphelele yifilosofi yethu. Uzobona inzuzo enkulu ngokusebenzisana ne-CPM!
We nakho kuzo zonke izinhlobo insimbi kanye nokufakwa standard ejwayelekile
Ukupakisha nokugcina impahla
Langaphambilini Izingxenye Zemoto Isikhunta
Olandelayo: Izihlungi zika-Oyili ama-ccessories epulasitiki